Debian 11 na -abịa na Linux 5.10, mmelite ngwugwu, ndozi na ndị ọzọ | Site na Linux
Debian 11 na -abịa na Linux 5.10, mmelite ngwugwu, ndozi na ndị ọzọ
Ọchịchịrị | 27/08/2021 10:55 | Emelitere ka 27/08/2021 19:56 | Nkesa
Mgbe mmepe afọ abụọ gasịrị, e kpughere ya ụbọchị ole na ole gara aga ntọhapụ nke ụdị ọhụrụ nke Debian 11.0 Bullseye, mbipute na na -abịa n'ọtụtụ mgbanwe Ọ nwekwara ngwugwu ọnụọgụ abụọ 59551 na ebe nchekwa (42821 isi iyi), nke bụ ihe dịka 1848 karịa ihe enyere na Debian 10.
Tụnyere Debian 10, agbakwunyere ọnụọgụ abụọ nke 11294, 9519 (16%) wepụrụ ngwugwu ochie ma ọ bụ nke gbahapụrụ agbahapụ, 42821 ngwugwu emelitere (72%). Ọnụ ọgụgụ mkpụrụedemede niile enyere na nkesa bụ akara koodu 1.152.960.944. Ndị mmepe 6208 sonyere na nkwadebe mmalite.
1 Top ohuru na Debian 11
2 Budata ma nweta Debian 11
Top ohuru na Debian 11
N'ime ụdị ọhụụ ewepụtara, anyị nwere ike ịhụ kernel nke Linux 5.10yana gburugburu desktọpụ GNOME 3.38, KDE Plasma 5.20, LXDE 11, LXQt 0.16, MATE 1.24, Xfce 4.16 na ngwaọrụ mmepe GCC 10.2, LLVM / Clang 11.0.1, OpenJDK 11, Perl 5.32, PHP 7.4, Python 3.9.1, Rust 1.48, Glibc 2.31.
N'akụkụ ngwa ndị a na -enye na Debian 11, anyị nwere ike ịchọta LibreOffice 7.0, Calligra 3.2, GIMP 2.10.22, 1.0.2 Inkscape, Vim 8.2, Apache httpd 2.4.48, BIND 9.16, Dovecot 2.3.13, Exim 4.94, Postfix 3.5, MariaDB 10.5, nginx 1.18, PostgreSQL 13, Samba 4.13, MepeeSSH 8.4.
Ihe nrụnye eserese na -enye ihe owuwu nwere libinput kama onye ọkwọ ụgbọ ala evdev, nke na -akwalite nkwado mmetụ aka, gbakwunyere akara n'okpuru na aha njirimara akọwapụtara n'oge nrụnye maka akaụntụ mbụ yana itinye ngwugwu iji kwado ịdị mma nke sistemụ, ma ọ bụrụ na achọpụtara mwepụta na gburugburu n'okpuru njikwa gị. A na -eji isiokwu Homeworld ọhụrụ.
Onye nrụnye na -enye ike ịwụnye desktọọpụ GNOME Flashback, nke na -aga n'ihu na mmepe nke koodu ogwe GNOME mara mma, onye njikwa windo Metacity, na applets dị na mbụ dị ka akụkụ nke ụdị ọzọ GNOME 3.
Banyere ndozi ndị egosipụtara na Debian 11, anyị nwere ike ịhụ nke ahụ UPS na SANE na -enye ike ibipụta na nyocha na -enweghị ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala mbụ na ngwa nbipute na nyocha ejikọrọ na sistemụ site na ọdụ ụgbọ USB. Ọnọdụ ọkwọ ụgbọ ala na-akwado IPP N'ebe niile ndị na-ebi akwụkwọ na ndị na-ebi akwụkwọ protocol: eSCL na WSD protocols (a na-eji azụ azụ nke ọma na nke ọma-airscan).
E tinyela iwu ọhụrụ "mepere emepe" imeghe faịlụ na mmemme ndabara maka ụdị faịlụ akọwapụtara. Site na ndabara, a na-ejikọ iwu ahụ na ngwa xdg-mepere emepe, mana enwere ike ịgbakwunye ya na onye na-arụ ọrụ mailcap, nke na-eburu n'uche njigide nke usoro mmelite ọzọ mgbe ọ malitere.
Systemd na -eji otu ọkwa otu jikọtara ọnụ (cgroup v2) na ndabara. Isi ihe dị iche n'etiti cgroups v2 na v1 bụ iji usoro ndị otu na -ahụkarị maka ụdị akụ niile, kama ịbụ ọkwa dị iche iche maka oke akụrụngwa CPU, mkpọtụ ebe nchekwa, na I / O.
Ọzọkwa, kernel nwere a ọkwọ ụgbọ ala ọhụrụ maka sistemụ faịlụ exFAT enyere ya na ndabara, nke anaghị achọzi nwụnye ngwugwu exfat-fuse. Ihe ngwugwu a gụnyere ngwugwu exfatprogs nwere ngwa ọrụ ọhụrụ maka imepụta na ịchọpụta exFAT FS (ntọala exfat-utils ochie ka dịkwa maka nrụnye, mana akwadoghị iji ya).
Algọridim hashing algorithm bụ yescrypt kama SHA-512.
Agbakwunyere ikike iji ngwaọrụ jikwaa igbe igbe Podman, gụnyere dị ka onye nnọchi Docker.
Gụnyere ndị ọkwọ ụgbọ ala Panfrost na Lima, nke na -enye nkwado maka Mali GPU nke ejiri na motherboards wuru ARM.
A na-eji intel-media-va-ọkwọ ụgbọ ala na-eji ngwa ngwangwa ihe ngbanwe vidiyo nke akụrụngwa nke Intel GPU nyere dabere na Broadwell microarchitecture na nke ọhụrụ.
Grub2 na -agbakwụnye nkwado maka SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), nke na -edozi okwu nwere nwepu akwụkwọ maka UEFI Secure Boot.
Ngwa win32-loader, nke na-enye gị ohere ịwụnye Debian site na Windows na-enweghị ịmepụta mgbasa ozi nrụnye dị iche, na-agbakwunye nkwado maka UEFI na Secure Boot.
A na -eji ihe nrụnye eserese maka ihe owuwu ARM64.
A kwụsịrị foto CD otu Xfce na 2 & 3 DVD ISO kwụsịrị maka sistemụ amd64 / i386.
Si ị chọrọ ịmatakwu banyere ya, you nwere ike ịlele nkọwa Na njikọ na-esonụ.
Budata ma nweta Debian 11
Maka ndị nwere mmasị ịnwale ụdị Debian 11 ọhụrụ a, ha kwesịrị ịma na ọ dị maka itoolu n'ime ndị na -ese ụkpụrụ ụlọ nwere nkwado gọọmentị yana onyonyo nrụnye dị (ya na GNOME, KDE, LXDE, Xfce, Cinnamon na MATE) ) nwere ike ibudata na HTTP, jigdo ma ọ bụ BitTorrent.
Nke a ị nwere ike ime site na njikọ na-esonụ.
A ga -ewepụta mmelite maka Debian 11 maka afọ 5.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Debian 11 na -abịa na Linux 5.10, mmelite ngwugwu, ndozi na ndị ọzọ
GNOME 41 beta na -abịa na ndozi interface, ogwe, nkwado na ndị ọzọ